‘धुर्मुस–सुन्तली’ को फिल्ममा कहाँबाट आयो लगानी ? - गसिप - साप्ताहिक
‘धुर्मुस–सुन्तली’ को फिल्ममा कहाँबाट आयो लगानी ?
चितवनमा अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउन व्यस्त छन् धुर्मुस–सुन्तली । केहि समयदेखि रोकिएको उक्त काम अहिले फेरि सुरु भएको छ । यति मात्रै होइन केहि महिनादेखि उनिहरु चलचित्र निर्माणमा पनि व्यस्त छन् ।
हालै उनिहरुको चलचित्रलाई रामबाबु गुरुङले निर्देशन गर्ने समाचार बाहिर आएको छ । राम्रै रकममा गुरुङलाई निर्देशनको जिम्मेवारी दिइएको श्रोतको दाबी छ । हालै बाहिरिएको खवर अनुसार सिताराम–कुन्जना मुख्य भुमिकामा काम गर्नेछन् । लामो समयदेखि समाजसेवामा सक्रिय यो जोडी ठुलो पर्दामा फर्किन लागेका हुन्, आफ्नै चलचित्रबाट । ‘मेरि बास्सै’ देखि चर्चामा आएको यो जोडि चलचित्रमा सफल होला किन नहोला ? त्यो भने समयले बताउला ।
उनिहरुले यो चलचित्रको नाम ‘एन्टीभाइरस’ राखेका थिए । पछि सेन्टि भाइरस राखे । अहिले उक्त चलचित्रको नाम परिवर्तन भएर ‘छलकपट’ राखेको बुझिएको छ ।
समाजसेवाको नाममा एक–एक रुपैयाँ जुटाएर स्टेडियम बनाउँदैछन् । यता करोडौं रकम जुटाएर चलचित्र बनाउँदैछन् । चलचित्र उद्योगमा अर्को हल्ला के पनि बाहिरिएको छ भने धुर्मुस–सुन्तलीले समाजसेवाको नाममा कतै पैसाको चलखेल त गरेका छैनन् ? सधै बजारमा हल्ला मात्रै कहाँ हुन्छ ? प्रश्न पनि खडा हुन्छ । चलचित्र निर्माणका लागी कहाँदेखि आयो यत्रो पैसा ? सुरुमा स्टेडियमको काम सकेपछि मात्रै अन्य काममा लागे हुँदैन ? धेरै सुभचिन्तकले गरिरहेको यो प्रश्नसहितको जवाफ नदिएर चलचित्रको सुटिङ सुरु भयो भने धुर्मुस–सुन्तली राम्रैसँग आलोचना हुने निश्चित छ ।
प्रकाशित :श्रावण १२, २०७६
रङ्गशाला बनाउन श्रीलंकन मैदान बिशेषज्ञ
साताका फिल्मी खबर
श्रोतले भन्यो, ‘अनमोलको ‘धुपौरे’ अहिले बन्दैन’ कार्तिक २०, २०७६
गुड टाइम्स लेख्दै अदितीले सार्वजनिक गरिन् प्रेमी कार्तिक १७, २०७६